Iswiidhen oo dhaleeceyn uga timid Qaramada Modoobey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Jörgen Heikki/ Sveriges Radio Sameradion.
Iswiidhen oo dhaleeceyn uga timid Qaramada Modoobey
La daabacay torsdag 5 september 2013 kl 09.48
Guddiga Qaramada Midoobey u qaabbilsan ka hortagga dad-faquuqa ayaa ku tilmaantay siyaasadda macdan-qodidda Iswiidhen mid jebineysa qaraarada qaramada midoobey. Guddigu wuxuu jecel yahay in uu arko in dadka saamerku ay saameyn dheeraad ah ku hawlaha macdan-qodidda ee ka socota dhulka ay ku nool yihiin.
Dhanka kale qoraal cusub oo uu guddigu dhowaan soo saaray waxaa lagu ammaanay dhawr qodob oo ay Iswiidhen dhaqangelisey, kowaas oo ay ka mid yihiin xeerkii lagu qarameynayey dhawr af oo ay ku hadlaan dadka laga tirada badan yahay iyo dastuurka Iswiidhen lagu qoray in dadka saamerku yihiin qowmiyad gaar ah. Balse wuxuu guddigu dhaleeceyn ka muujiyey qodobo kale oo badan.
Guddigu wuxuu walaac ka muujiyey sharciyada macdan-qodidda oo oggolaanaya in mashaariic ballaaran oo macdan-qodid ah laga bilaabo dhulka ay degto qowmiyadda saamerku, iyadoo aan laga la tashan qowmiyadda saamerka. Waxaana mashaariicdaas ka mid ah macdan bir ah oo laga qodayo aagga Kallak oo ku yaal bannaanka magaalada Jokkmokk. Mashruucaasna waxaa ka dhashay gadood soo bilowdey bilowgii xilligaan kuleylaha.
Dhacdadaani waxay ka horjeedaa qaraarada Qaramada Midoobey. Sidaas awgeed ayuu hadda guddiga Qaramada Midoobey u qaabilsan la dagaalanka dad-faquuqu Iswiidhen ku la talinayaa in ay sharciyada wax ka beddesho oo u oggolaato qowmiyadda saamerka in ay saameyn ku yeeshaan dhulka ay degaan.